landa u-Cleartrip - Flights, Hotels, Train Booking App ngu-Cleartrip apk yakamuva kakhulu app yamadivayisi we-android
I-One One Stop Travel App yokubhuka izindiza, amahhotela, izitimela nemisebenzi!
Abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-25 bakhethe uCleartrip APP ukuhlela, ukucinga nokubhuka ukuhamba kwabo. Londoloza isikhathi nemali lapho ubhalela amathikithi ezindiza namahhotela nge-Cleartrip ukuhamba APP njengoba ukhathaza lezo zindawo ezinhle ohlwini lwakho lwamabhakede ohambo.
Yenza okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo nokuyingqayizivele edolobheni lakho noma lapho uhamba neCleartrip Imisebenzi. Khetha ezintweni ezimangalisayo okumelwe ukwenze, futhi ujabulele izenzakalo ezinhle ezenzeka emzini wakho ozikhethelayo. Konke ngohlelo lokusebenza olulodwa olwesabekayo.
<b> I-Award Yokunqoba I-Flight Booking APP
- Sesha futhi ubheke izindiza ezindiza ezihamba phambili nezamazwe ngamazwe ngamadili angcono kakhulu atholakalayo nale APP yokubhuka indiza elula ukuyisebenzisa.
- Thola indiza eshibhile ngokusesha izindiza ngedolobha noma sezindiza usebenzisa i-APP.
- Setha isaziso sokuhamba ngokusesha kwakho futhi sizokwazisa lapho intengo ihla noma uma isanda ukwanda nge-APP.
- Khetha kusuka kuzo zonke izindiza ezindizayo, ezihlanganisa i-IndiGo, i-Jet Airways, i-SpiceJet, i-Air India, i-Air Asia, i-Emirates, i-Etihad, i-Singapore Airlines, i-Lufthansa, i-Qatar Airways, i-Thai Airways, i-British Airways nokunye ukubhuka kwezindiza yethu yasekhaya nasemhlabeni jikelele APP.
- I-Cleartrip Expressway: Manje gcina isikhathi ngokubhuka kwethekithi yendiza engu-1 yokubhuka emasekhondini angaphansi kwengu-60 uma ulondoloza amakhadi wakho (evikelekile usebenzisa ubuchwepheshe bokubethela imboni).
- Khetha izinketho eziningi zokukhokha kufaka phakathi amakhadi esikweletu, amakhadi we-debit, amabhange asetshenzisiwe kanye nezintandokazi ezidumile ezifana ne-PayTm, i-PayZapp, i-PayU Money, i-OlaMoney ne-MasterPass.
- Yenza uhambo lwakho nawe nomaphi lapho uya khona, ngisho noma ungaxhunyiwe ku-intanethi, futhi ungahambisani nephepha lokuhamba nge-APP.
- Khansela noma ususe kabusha ukubhuka kwendiza yakho kusuka ku-APP.
<b> Ukubhuka kwamahhotela okusheshayo okusheshayo APP / / b>
- Thola amadili amakhulu kumahhotela emadolobheni angu-15000 + ngokusebenzisa i-APP yokubhuka ihhotela.
- Sesha futhi ufunde amakamelo ukusuka ekukhethweni okukhulu kwamahhotela, kuwo wonke amabhajethi.
- Pay @ Hotel Book ekamelweni lakho lehhotela eCleartrip futhi ukhokhe ngqo ehhotela.
- Sebenzisa intengo, isilinganiso sezinkanyezi, izilinganiso zabahambi (ezinikezwa yi-TripAdvisor) nezihlungi zendawo ukuze uthole ngokushesha ihhotela elihle kakhulu. Le search search i-APP yenza kube lula ukuthola nokubhuka ihhotela lakho lephupho.
- Funda i-TripAdvisor ukubuyekezwa ngabanye abahambayo - Esinye isici esiwusizo salesi sokubhuka i-APP ephelele yokusiza ukukhetha ihhotela elilungile.
<b> Ukubhuka kwezitimela ze-IRCTC
Bhalisela i-IRCTC amathikithi okuqeqesha kalula futhi ngokulula usebenzisa uhlelo lokusebenza leselula lokubhuka ithikithi likaTroartrip.
-Izincwadi zokuhamba ngezinyawo ezihamba phambili eNdiya manje zilula ngeCleartrip.
- Sesha izitimela ozidingayo. Ungakwazi ngokushesha ukubhuka amathikithi usebenzisa uhlelo lokusebenza lokubhuka ngesitimela ngokuchofoza okumbalwa bese ukhansela ukubhuka uma izinhlelo zakho zishintsha.
- Zonke izindlela ezinkulu zesitimela ziyatholakala kuhlelo lokusebenza. Ungathola kalula izitimela zomzila wakho odingekayo.
- Khokha ukubhuka kwakho kwe-inthanethi ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza. Uhlelo lokusebenza olunikwe amandla i-IRCTC lunikeza isipiliyoni sokubhuka ithikithi lomzila wesitimela.
<b> I-Cleartrip Imisebenzi - thola idolobha lakho
Imisebenzi ye-Cleartrip inikeza isethi ephelele kunazo zonke zokuphuma ukuze ujabulele uma usedolobheni lakho noma uhamba ekuhambeni. Ngezenzo, sithumela okuhlangenwe nakho okumangalisayo edolobheni lakho.
- Thola futhi ubhale okuhlangenwe nakho okumangalisayo & thola ukushisekela kwakho, kube ngomuzi wakho noma ohambweni. Phuma wenze into oyithandayo noma uzame okuthile okusha.
- WonderLa kanye nezinye amapaki, Theme Harley Davidson ukugibela, scuba diving, izingane workshops noma ukuvakasha ukudla, kukhona into wonke umuntu.
- Jabulela ukudla okunomsoco ezindaweni zokudlela ezinhle edolobheni lakho. Yiphangiwe ngokukhetha.
- Yazi ukuthi kwenzekani edolobheni lakho. Thola izenzakalo. Umculo, amahlaya, ama-workshops - konke okukhona ku-APP ye-Cleartrip yokuhamba.
Incazelo yezimvume esizifunayo uma ufaka uhlelo lwe-Cleartrip: http://www.cleartrip.com/android-permissions/
Ungakhohlwa ukulinganisa nathi ku-Google Play Isitolo bese wabelana ngempendulo yakho.</b></b></b></b></b>
ClearTrip, Expedia, SkyScanner - All in one travel